अर्थतन्त्र Archives - Page 99 of 166 - Purbeli News
मध्यपहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा समस्या
बैतडी / बैतडीसहित मध्यपहाडी क्षेत्रमा गहुँ छर्न शुरु भएसँगै किसान गहुँ छर्ने काममा व्यस्त छन् । कात्तिक पहिलो सातादेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म गहुँ छर्नका लागि उपयुक्त समय भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत कर्णबहादुर चन्दले बताउनुभयो । गहुँ छर्ने बेलामा खेतलाई राम्रोसँग खनजोत गरी गोबर मल हालेर गहुँ छरेमा उत्पादन राम्रो हुने उहाँले बताउन...
शिवम् सिमेन्टको उपभोक्ता सम्मान योजनाको समापन
शिवम् सिमेन्टस्ले आफ्ना ग्राहक एवं उपभोक्ताहरुका लागी २० बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा सम्मान स्वरुप कम्पनीको तर्फबाट कदर स्वरुप दिदै आएको थप १ बोरा उपभोक्ता योजना अाज अाइतबारदेखि समापन गर्ने घोषणा गरेकाे छ । कम्पनीले २०७४ असार १४ गते देखि नेपालभर साे लागु गरेको थियाे । शिवम् सिमेन्टले हेटौडा स्थित जर्मन उच्च प्राविधियुक्त प्लान्ट एण्ड मेशिनरी जड...
यस्तो छ अाजकाे बिदेशी मुद्राको बिनिमय दर
काठमाडौं / साताको पहिलो दिन आज सुनचाँदिको मुल्य केहि बढेको छ । आज सुन प्रतितोला २ सय रुपैया बढेर ५५ हजार ७ सय मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदि ब्यबसायी संघले जनाएको छ । हिजो र अस्ती प्रतितोला सुन ५५ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै चाँदिको मुल्य पनि बढेको छ । आज प्रतितोला चाँदि ७ सय ६० मा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा सार्वजनिक बिदा नबढाउन आग्रह
काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिदाका समयमा पनि आर्थिक एवं वित्तीय संस्थामा कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखेको छ । चेम्बरले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जात्रापर्वका नाममा धेरै बिदा दिँदा आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेकाले बताउँदै संस्कृति, जात्रा र पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने वर्तमान सरकारी व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक अस...
काठमाण्डाै । आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ असोज महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य रु. ५१ अर्व ३३ करोड ९९ लाख २२ हजार रहेकोमा रु. ५१ अर्व ६२ करोड ९७ लाख १३ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १०१ प्रतिशतको प्रगति भएको छ भने गत वर्षको असोजसम्मको...
सुनको भाउ घट्यो, यस्ताे छ आजकाे मुल्य ?
काठमाडौं / साताको अन्तिम दिन आज सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुन आज प्रतितोला दुई सय रुपैयाँले घटेर ५५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सुनको मूल्य ५५ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर ७ सय ५५ रुपैयाँ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । हिज...
उदयपुर / देशकै ठूलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जलजलेस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले तीन महिनाभित्र रु ५० करोड मूल्यको सिमेन्ट बिक्री गरेको छ । साउनको पहिलो हप्तादेखि अहिलेसम्म उद्योगले छ लाख २० हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको छ । अहिलेसम्मकै अत्यधिक सिमेन्ट बिक्री गर्न सफल भएको उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । गैँडा छाप सिमेन्टको मा...
यस्ताे छ आजकाे सुनचाँदी मुल्य
बिहिबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यथावत रहेकाे छ । हिजाे सुन प्रतितोला ५५ हजार ९ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको मा । अाज बिहिबार पनि सुनको मूल्य ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेकाे छ । त्यस्तै चाँदीको पनि यथापत रहेकाे छ । आज चाँदी प्रतितोला ७ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।